Midowga Musharaxiinta oo si kulul uga jawaabay doorashada boobka ee golaha Shacabka
November 30, 2021 F.G 0
Midowga Musharaxiinta ayaa war saxaafadeed ka soo saaray shirar maalmihii la soo dhaafay u socday oo looga hadlayay geeddi socodka doorashooyinka ayaa caddeeyay in waxa socda aan lagu tilmaami karin doorasho oo ay tahay boob qaawan oo dalka u horseedi karta qalalaase siyaasadeed, xasillooni darro iyo Nabadgelyo la’aan. Golaha ayaa soo saaray todoba qodob oo ay ku sheegeen inay tahay qaladaad cad oo doorashada dalka ka socota lagu dhaqaaqay. 1- In laga tegey odayaashii dhaqanka ee xaqa u lahaa in ay soo xulaan ergooyinka dooranaya xildhibaanada. 2- In aysan jirin ergo la xulay, la diiwaan geliyey, la tababaray, guddiga doorashooyinka ee heer Federaalna (FIET) ay hubiyeen. 3- In ergooyin laga dhigay shaqaalihii rayidka ahaa, ciidanka dawladda iyo dad aan mararka qaar ku hayb ahayn qabaa’ilka kursiga lahaa. 4- In loo diiday diiwaan gelinta tartanka kursiga xildhibaanno kuraasta hore ugu fadhiyey, iyo kuwo kale oo xaqu lahaa, halka la diiwaan geliyey xubno aan soo buuxinin shuruudihii diiwaan gelinta. 5- In ay luntay madaxbannaanidii, iyo dhexdhexaadnimadii guddiyada doorashada heer dawlad goboleed, kuwaasoo toos uga amar qaadanaya Madaxweynaha [Sii aqri]
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa sheegay inay gudbiyeen dacwad ka dhan Cismaan Aw Maxamuud Maxamed “Boqor Buurmadow si loo soo xiro. Guddoomiye Ku xigeenka Amniga Iyo Siyaasadda Gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere (Cali Yare) ayaa bartiisa Facebook kusoo qoray inay gudbiyeen dacwad ay ku codsanayaan in lagu soo xiro Buurmadoow. “Gefkii ka soo yeeray Buurmadow ee uu cadowga Alshabaab ku taageeray uguna aqoonsaday “Dowlad” reerkiisu maamulo” ayuu yiri Cali Yare. Sidoo kale ilaa iyo hadda ma kala cadda halka uu dacwadda ka furay Cali Yare. Boqor Buurmadoow oo maalmahan booqasho ku marayay Muqdisho ayaa la arkayay isaga oo jeedinayo hadal uu ku sheegayo in ‘Shababka’ ay madax ka yihiin beeshiisa isla markaana ku tilmaamay ‘dowlad aanan lagu tartamin’ Dadka ka hadlay arrintan waxaa kamid ah wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya, Yuusuf Garaad oo ugu baaqay Boqor Buurmadow in uu raaligelin ka bixiyo hadalka.
SAWIRO:Madaxweeyne Muuse Biixi oo qaabilay Orodyahanada Mo Farah Iyo Nageeye
Madaxweynaha Maamulka Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa qasriga Madaxtooyada ku qaabiley orodyahan Maxamed Mukhtaar Jaamac Faarax (Mo Farah) oo uu wehelinayey Orodyahan Cabdi Aadan Nageeye oo u u kala orda dalalka Britain iyo Holand Kulankan Muuse Biixi ku qaabiley Oradyahannada caanka ah oo lagu tilmaamay inuu ahaa dhiirigelin uu u muujiyey labadaa orodyahan ayaa kula dardaarmay inay halkaa ka sii wadaan dedaalkooda, tusaale fiicana u noqdaan jiilasha soo koraya. Madaxweynaha ayaa ku maammuusay orodyahanada bilado abaalmarin ah oo ka turjumaya dedaalka iyo kartida ay muujiyeen. Madaxweynuhu wuxuu ku soo dhaweeyey Mo Farah dalkiisa hooyo, isagoo uga mahadnaqay inuu soo kaxaystay, dalkana keenay saaxiibadiisii ay isku mihnada ahaayeen oo uu ugu horreeyo Cabdi Aadan Nageeye oo isagu ah oradyahan kale oo caana una orda dalka Holland balse wakhtigiisii fasaxa ku yimid Somaliland. Dhinaca kale oradyahannada waxa ku wehelinayey Mo Faarax walaalkii Xasan Mukhtaar Jaamac Faarax iyo wiil uu dhalay Mo Farah iyo xubno kale oo muhiima.
Boqor Buur-Madow Oo Sheegay In Hadal Uu Jeediyay Si Qaldan Loo Fasirey Lana Siyaasadeeyay
Boqor Cusmaan Aw Maxamuud oo loo yaqaan Boqor Buurmadow ayaa ka hadlay shi jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay war dhawaan laga faafiyay oo dhaliyay muran badan. Boqor Buurmadow waxa uu xusay in fasiraad qalad ah laga bixiyey war uu ka sheegay kulan beeleed ka dhacay magaalada Baydhabo.” Hadalkii aan dhawaan ka sheegay shirkii Beeleedka ahaa waxaa loo dhigay meel aan biyo dhiciisa aheyn si qaldan ayaa loo fasiray waana la siyaasadeeyey” ayuu yiri Boqor Buurmadow. Waxa uu ku sheegay shirkiisa jaraa’id Boqor Buurmadow inuusan taageersanayn mabd’a Alshabaab isla markaana uusan raali ka ahayn in dhiig Muslim la daadiyo ha noqoto qaab diimeed iyo qaab kalaba. Ugu dambeyntii Boqor Buurmadow ayaa sheegay inuu raaligelin buuxda siinayo shacabka Soomaaliyeed ee dhibsaday hadalkii dhawaan kasoo yeeray. Warka Boqor BuurMadow ayaa waxaa si weyn uga carooday siyaasiyiin faro badan oo uu ka mid ahaa guddoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir oo maanta bartiisa ku soo daabacay inuu taageersan yahay in la dhigo banaanbaxyo loogaga soo horjeedo Boqor Buurmadow.
Kursi Si Xoogan Loogu Loolamay ayaa Doorashadiisa Ka Dhacaday Magaalada Baydhabo
Guddiga maamulka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ayaa qabtay Tartanka kursiga sumadiisa ay tahay Hop#193 oo ay ku tartameen musharaxiinta kala ah: 1-Musharax Xildhibaan mudane, Cabdulaahi Aadan Axmed (Black) iyo Musharax Xildhibaan mudane, Cabdiqaadir Maxamed Cali (Baashi)Mudane Cabdulaahi Aadan Black ayaa helay codad dhan 66 cod, halka musharaxii la tartamayey Cabdiqaadir Maxamed Cali Baashi uu helay 31 cod. Codadka xumaaday waa 3 cod Natiijada hordhaca ah waxaa kuso baxay kursiga tirsigiisu yahay HOP#193 Xildhibaan Cabdilaahi Aadan Axmed (Black)
Musharixiintii ugu badnaa oo ‘lacago laga dhacay’ kadibna la boobay kuraastooda
November 30, 2021 M.Jo 0
Waxaa malmahaan socday qabashada doorashada Golaha Shacabka Soomaaliya waxaa soo kordhacaya cabashada xoogan ee kasoo yeereysa xubnaha musharixiinta xil doonka ee u tartamaya kuraasta baarlamaanka 11-aad ee dalka. Xildhibaan Idirs Cabdi Dhaqtar oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka muddo xileedkiisa uu dhammaaday, isla-markaana haatan isku soo sharaxay kursiga uu ku fadhiyey ayaa shaaca ka qaaday in la boobay kursigiisa oo uu sheegay in qoondo haween la dhigay, kadibna loona diiday inuu tartamo, sida uu hadalka u dhigay. Dhaqtar ayaa sidoo kale tilmaamay in isaga iyo musharixiin kale oo dhowr labaatan ah in laga dhacay lacago fara badan, loona diiday shahadaada, si ay u tartamaan. Guddiyada doorashooyinka ayuu ku eedeeyey inay u shaqeynayaan dad gaar ah oo ku xiran Villa Soomaaliya, isla-markaana cadaalad darro ku sameynayaan doorashooyinka. “Lacago ayaa naga maqan aniga kaligey ma’ahan inta lacagta ay ka maqan tahay waa dhowr iyo labaatan qof oo inta ay lacagtooda shubteen aan haba yaraatee shahaado lasiinin,” ayuu yiri Xildhibaan Idirs Cabdi Dhaqtar oo wariyeyaasha kula hadlay Muqdisho. Sidoo kale wuxuu intaasi ku sii daray [Sii aqri]
Rooble Oo Madaxda D/goboleedyada kala hadlay Cabashada ka taagan Doorashada
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa guddoomiyay kulan ay habka fogaan aragga ku yeesheen Golaha Wadatashiga, kaasi oo looga hadlay Cabashada ka taagan Dooraahada Golaha Shacabka. Ra’iisul Wasaaraha ayaa madaxda Golaha Wadatashiga ugu baaqay in ay lagama maarmaan tahay doorashadu noqoto mid daahfuran oo lagu qanci karo, isagoo madasha u gudbiyay walaaca iyo cabashooyinka la xiriira doorashada qaar ka mid ah kuraasta Golaha Shacabka. Ra’iisul Wasaaraha ayaa uga mahadceliyay dowlad-goboleedyada bilaabay doorashada Golaha Shacabka, isagoo ka codsaday kuwa harsan in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan.
Weeraro Madaafiic ah Oo ka dhacay Magaalada Baydhabo
Ururka Al-Shabaab ayaa xalay saqdii dhexe weerar madaafiic ah & mid toos ah ku Qaaday Saldhigyada Ciidamada Itoobiya & kuwa Booliska Koonfur Galbeed ee Magaalada Baydhabo, iyada oo uu jiray dagaal ka dhacay meelo kamid ah Magaalada Baydhabo. Weerarka madaafiic ah oo jugtooda siweyn looga maqlay Magaalada Baydhabo ayaa waxaa lagu qaaday Saldhiga Ciidamada Itoobiya, waxaana la sheegay in ciidamada Itoobiya dhankooda ay madaafiic kale uga jawaabeen weerarka lagu soo qaaday. Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in Al-Shabaab ay sidoo kale weerar toos ah ku qaadeen Saldhiga Ciidamada Booliska Koonfur Galbeed ku leeyihiin Suuqa Xoolaha Magaalada Baydhabo, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la leysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in ay jiraan khasaaro dhaawac ah oo dad rayid ah kasoo gaaray weeraradaas. laamaha Amniga Magaalada Baydhabo ayaan weli ka hadlin weeraradaas, hayeeshee waxaa ay kusoo aadayaan xilli Magaalada Baydhabo ay ka socoto doorashada Xildhibaannada Golaha Shacabka
Wasiir C/llaahi Maxamed Nuur oo galay khalad diblomaasi oo weyn oo ka dhan ah Turkey
November 29, 2021 F.G 0
Wasiirka Amniga Gudaha Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa shalay ku dhacay gef diblomaasiyadeed oo weyn kadib markii uu dib u tweet gareeyey sawir gacmeed lagu weeraray Turkey oo saaxiib dhow la ah dowladda federaalka Soomaaliya. Sawir gacmeedka oo uu sameeyey Siyad Arts ayaa muujinaya diyaaradda Turkish Airlines oo qeybta hore Ethiopia uga daadineysa diyaardaha Drone-ka ee Turkey ay sameysay, halka qeybta dambena ay ka degayaan dad shacab ah. Sawir gacmeedka ayaa waxaa raacsan qoraal uu Siyad Arts ku yiri “Turkey waxay Ethiopia ku harqineysaa drones, kadibna waxay shacabkeeda u sheegeysaa inay dalkaas uga baxaan sida ugu dhaqsaha badan ayaga oo aan dib u dhigin.” Turkey, oo bishii October heshiis kula gashay xukuumadda Abiy Ahmed inay ka iibiso diyaarado Drone ah, ayaa la kulantay dhalleeceyn xooggan oo ah inay sii hurineyso dagaalka dalkaas, xilli beesha caalamka inteeda kale ay isku dayeyso in la xakameeyo, ayaga oo cunaqabteyno dhowr ah saaray xukuumadda Abiy. Wasiir Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa dib uga laabtay tweet-kaas oo loo arkay inuu ku taageeray cambaareynta ka dhanka ah Turkey, wuxuuna kadib tweet kale [Sii aqri]
Jabhada TPLF Oo Si Kulul Uga Jawaabtay Hadalkii Kasoo Yeeray Madaxweeyne Muuse Biixi
Afhayeenka tigreega ayaa sheegay in Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu dhabar jebin uu ku sameeyay Somaliland, taasi oo carrabka ku dhiftay in aysan jirin sabab uu u taageero, waa sida uu hadalka u dhigaye. “Somaliland Ma Ilowsana dhabar jabintii Abiy ku samaynayay markuu farmaajo heshiiska la saxeexday’’ ayuu yiri Afhayeen TPLF Gatachu Reda, mar uu ka jawaabyay war la faafiyay oo ku aaddana in Muuse Biixi uu taageero la garab taagan yahay Dowladda dhexe ee Itoobiya, sida lagu baahiyay Warbaahinta Fana ee ku hadashada afka dowladda Itoobiya. Afhayeenka TPLF Gatachu Reda ayaa hadalkaa jeediyay, isaga oo la hadlaayay shabakadda Tigree News, ee baahisa wararka jabhadda dagaalka kula jirta Dowladda federaalka Itoobiya Tigreega. Sidoo kale Afhayeenka ayaa inta ku daray in shacabka Somaliland aan la qaldi Karin sidoo kalena, Abiy Ahmed uu wado marin habaabin iyo sidii danihiisa uu uga fiirsan lahaa Gobolka, isagoo ku eedeyay iska horkeenid. hadalka Afhayeenka Tigreega ayaa imaanaya, iyadoo Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi uu taageero u muujiyay dowladda Itoobiya ee dagaalka kula jirta xoogagga fallaagada ah ee TPLF. “Waxaan [Sii aqri]